တောင်တွင်းကြီးမြို့အနီးမှ တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ « MMWeather Information BLOG
« ကမ္ဘာကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားနိုင်သည့် ကြီးမားသော ဂြိုဟ်သိမ် တစ်ခုတွေ့ရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း »
By mmweather.ygn, on October 25th, 2011
ဤဖြစ်စဉ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု အဖြစ် ယူဆနိုင်ပြီး တည်နေရာအား လေ့လာခဲ့ရာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် တောင်တွင်းကြီး ငလျှင် လှုပ်သည့် ငလျှင် ဗဟိုချက်မှ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၄ မိုင်ခန့်၊ တောင်ညိုမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁ဝ မိုင် ကျော်ခန့်၊ နေပြည်တော်လေဆိပ် အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၄ဝ ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ပဲခူးရိုးမတောင်ပေါ်၊ ဝါးကတုတ်တမံ အနီး – အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကြွက်ဝမ်းဖြူများ အုပ်လိုက်ထွက်လာကာ နေရာပြောင်းကြသည်ဟု ယူဆရသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို မှတ်မိကြမည်ထင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ထူးဆန်းပြီး ဖြစ်နေကျမဟုတ်၊ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ မဟုတ်သည့် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ယခု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်တွင် မိုးသည်းထန်ပြီး ရေကြီးခြင်းများဖြစ်ခဲ့ပါသလော? ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လာနီညာ ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မိုးများပြီး ရေကြီးရသည်လော? စသည့် မေးခွန်းများအပြင် …. အောက်ပါ ပဟေဠိမေးခွန်းများကို သိရှိနားလည်သူ – ပညာရှင်ကြီးများမှ သုံးသပ်ဖြေကြားပေးနိုင်ပါလျှင် …
Uncategorized « ကမ္ဘာကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားနိုင်သည့် ကြီးမားသော ဂြိုဟ်သိမ် တစ်ခုတွေ့ရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း »
« ကမ္ဘာကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားနိုင်သည့် ကြီးမားသော ဂြိုဟ်သိမ် တစ်ခုတွေ့ရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum